ANDOHARANOFOTSY : MIADY AMIN’NY FAHAFATESANA ILAY MPANAO “TAXIPHONE” VOATIFITRALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYANDOHARANOFOTSY : MIADY AMIN’NY FAHAFATESANA ILAY MPANAO “TAXIPHONE” VOATIFITRA
ANDOHARANOFOTSY : MIADY AMIN’NY FAHAFATESANA ILAY MPANAO “TAXIPHONE” VOATIFITRA
Lehilahy mpanao “taxiphone” nikasa ny handeha fiara karetsaka hihazo ny fodiany no notifirina olon-dratsy teny Andoharanofotsy, afak’omaly alina. Lasan’ireto farany ny vola an-tapitrisany teny aminy ary mbola miady amin’ny fahafatesana eny amin’ny hopitaly ihany koa izy
Afak’omaly alina nanodidina ny tamin’ny 8ora no nandrenesana poa-basy nirefotra mafy teny akaikin’ny toeram-piantsonan’ireo fiara karetsaka, teny Andoharanofotsy. Lehilahy mpanao “taxiphone” manodidina ny 30 taona no fantatra fa niharan’izany tifitra izany avy tao an-damosiny raha nikasa ny hiditra tamina fiara karetsaka iray.
“Nanaraka azy tao aoriana ilay olona ka avy hatrany dia nitifitra azy tamin’ny basy rehefa niondrika hiditra tao anatin’ilay fiara karetsaka izy. Nitsirara tamin’ny tany ilay lehilahy ary nitsoaka ilay nahavanon-doza”, araka ny fitantaran’ny iray tamin’ireo mpamily fiara karetsaka nanakaiky ny toerana nisehoan’ny loza.
Na ity mpamily nitantara ny zava-nitranga ity aza raiki-tahotra noho ny filazany fa namany akaiky ny mpamily ilay fiara karetsaka izay niakaran’ilay mpanao “taxiphone”. Torak’izany ihany koa ity farany izay tsy nahavita na inona na inona akoatra ny fiankohofana tao ambanin’ny fitaovam-pamiliana.
LASA NY VOLABE
Fotoana vitsy taorian’izay dia nitangorona nanarina ilay lehilahy nianjera tamin’ny tany ireo olona teo amin’ny manodidina. Ity farany izay voalaza fa tsy nahatsiaro tena. Ny mpitandro ny filaminana moa tetsy andanin’izany tonga nizaha ny tranga ary nanakana fiarakodia nitondra haingana ilay naratra tany amin’ny hopitaly. Hatramin’ny omaly hariva dia voalaza fa mbola tsy nahatsiaro tena io lehilahy io.
Fantatra tamin’ny alalan’ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny mpitandro ny filaminana fa nitondra vola nanodidina ny 2 tapitrisa ariary ity lehilahy voatifitra ity, saingy nofaohan’ilay olon-dratsy nandritra ilay fotoana nianjerany tamin’ny tany izany.
“Mety ho efa nahafantatra ny fisian’io vola io ilay nahavanon-doza. Mety ho olom-patany ihany koa anefa”, araka ny tomban’ny mpitandro ny filaminana iray eny Andoharanofotsy.
Marihina fa voalohany izao, tato anatin’ny roa taona, no nitrangana tranga tahaka ity. Efa taona maro lasa izay no nandrenesana endrika tsy fandriampahalemana toy ny fanafihana “cashpoint” teny amin’ity toerana ity.
Partager la publication "ANDOHARANOFOTSY : MIADY AMIN’NY FAHAFATESANA ILAY MPANAO “TAXIPHONE” VOATIFITRA"
Everett Zaremski 17/09/2018 at 21:02 Repondre
Pingback: calphalon 1876788 contemporary hard anodized alumi